बस्नेतको उम्मेदवारी वडाअध्यक्षमा – Janacharcha.com
» समाचार अंक: 4796
Janacharcha.com आइतबार, बैशाख २५, २०७९ मा प्रकाशित
बिराटनगर महानगरपालिकाको सबैभन्दा बढी मत रहेको वडामध्ये ३ नम्बर सर्वाधिक चर्चामा रहेको छ । शत्रुघन पौडेललाई कांग्रेसको बागी उम्मेदवार बनाएको असन्तुष्ट खेमाको भनाइ रहेको छ । स्वतन्त्रबाट चुनाव चिन्ह चापाकल लिइ पौडेलले वडा अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका हुन् । यहाँ नेकपा एमालेबाट वासु बस्नेतको वडा अध्यक्षमा उमेदवारी परेको छ ।
बस्नेतको टिमका अन्य सदस्यहरुमा, ढुन्डिराज पोखरेल ,सुरज न्यौपाने ,मालिका निरौला ,अरुणा परियार(दलित) छन् । यही खारीएको टिमले प्यानल नै जित्ने बस्नेतको दाबी रहेको छ । कुल १२ हजार आसपास मत रहेको यस वडामा ७ हजार मत खस्ने अनुमान छ । ३ हजार मत ल्याउनेको वडा अध्यक्षमा जित सुनिश्चित हुन्छ । यसअघि यस वडामा कांग्रेसका बिनोद बस्नेतले २ हजार ४ सय १३ मत ल्याई विजयी भएका थिए । निकटतम प्रतिद्धन्द्धी को २ हजार २ सय ४६ रहेको थियो । जित हारको मतान्तर १ सय ६७ रहेको थियो ।
वि. सं २०२० साल ८ महिना ९ गते जन्मेका वासुको जिवीकोपार्जनको मुख्य सो्रत खेतीपाती नै हो । किसान पृष्ठभुमिका बासुको राजनैतिक यात्रा राधाकृष्ण मा.वि. बाट कक्षा १० मा पढ्दै गर्दा सुरु भएको हो । मुख्य चुनाबी एजेन्डामा डुबानको सम्याको हल, धुलाम्य सडकलाई चिल्ला सफा अपांगमैत्री हरियाँली बनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य सरसफाई एवम जेष्ठ नागरिकको सुविधामा सहजीकरण लागाएत छन् । जमानामा पूर्व माले देखि आजसम्म लालझन्डाकै सेरोफेरोमा आफ्नो जिवन अर्पण गरेका वासुको जित पक्का रहेको वडावासीहरु बताउँछन् । वासु निकटतम प्रतिद्धन्द्धी कांग्रेसका बागी उम्मेदवारलाई नै मान्छन् । तथापि आफु ३ नम्बर वडा मा निश्चित बिजय हुने बताउँछन् ।